BBC Somali - Cayaaraha - Daawo waraysiga MO Farah qaybta 1aad
13 Abriil, 2011, 18:53 GMT 21:53 SGA
Daawo waraysiga MO Farah qaybta 1aad
Waraysi Video ah oo BBC ay la yeelatay MO Farah, ayuu kaga hadlayaa taariikhdiisa cayaaraha orodka iyo guud ahaan guulaha uu ka gaaray cayaaraha.
Wuxuu kaloo MO Farah ka hadlayaa sida Soomaalidu mustaqbalka ugu leedahay cayaaraha fudud.
Wuxuu sheegay in uu hadda waddo u diyaargarowga tartanka World Championship, balse sidoo kale uu ka fakarayo in uu ku dadaalo sidii uu natiijo wanaagsan uga keeni lahaa tartanka Olympic-ada adduunka ee sanadka soo socda 2012 lagu qabanayo dalka UK, magaaladan London.
MO Farah, wuxuu horay ugu guulaystay tartamada orodka Europe ee indoors 5000m iyo 10000m oo sanadkii hore uu qaatay isku mar. Wuxuu sanadkan 2012 ku guulaystay tartanka half marathon-ka oo markii ugu horaysay uu waligiis ka qaygalay.
Lama filaynin in uu tartanka qaadayo, iyadoo orodyahan caan ah ay ka qaybgalayeen, iyo iyadoo horay aan tartan noocan ah loogu baran in uu ka qaybgalo.
Ciyaartooy lacag badan lagu iibsaday